Gaaffiin Uummata Ormoo Inni Duraa fi Gubaan Hidhachuu Dha! |
Home Afaan Oromoo Gaaffiin Uummata Ormoo Inni Duraa fi Gubaan Hidhachuu Dha!
Gaaffiin Uummata Ormoo Inni Duraa fi Gubaan Hidhachuu Dha!
Damee Boruu: 11/05/2018
Oromiyaan uumaa Waaqaaan badhaatu dha. Qabeeenya lafa irraa fi albuuda lafaa jalaa guutuu qabdi. Uuummatni Oromoos akkuma biyya isaa Waaqqayyo badhadhaa isa godhee uumee jira. Aaadaa jalalaa kan orma illee ofitti ammatu isaa godhu qaba. Namni Oromoo olaa hin dhiibatu. Keessuma isatti baqatee illee garaa guutuun tajaajila godhaaf. Garuu bara keessa jirru kana biyya lafaa irraa biyyaa isaa keessatti kan akka uummata Oromoo qe’ee isaa irraa buqqaa’ee baqataa tahee gidiraa argaa jiru hin argamu.
Maalif uummatni akkas nama jaalatuu fi orma ammatu biyya haadha isaa badhaatuu kana keessatti kadhatuu tahuu danda’e? gaaffiin jedhu deebii gahaa argaachuu qaba. Uummatni kun lakkoobsaan uummata biyya Impaayeera Itoophiyaa keessa jiran keessaa harka guddaa akka tahe illee wal nama hin gaaffachiisu miti. Karaa biraa seeraa fi hira bulmaataa kan jiruu fi jireenya isaa gamtaan gaggeefataa ture uummata hangafa Gaafa Afrikaa akka tahe namni hin beekne jira jedhee yaroo irratti hin balleessu. Uummatni kun qaamaan duwwaa utuu hin taane sammuu fi beekumsaan uummata biraa iraa kan adda tahe. Tooftaa lolaa fi diina of irraa ittisuu ijoollummaa isaa irraa kaasee uummata sadarkan barachaa fi shaakalaa guddatu dha.
Sababni uummatni jabaan akkasii cabee harka Habashaa jalatti kufuu danda’e kolonaalistoonni Awuroopaa Afrikaa qirachuu yaroo dhufan Mootummaa Habashaa humna waraanaa baraa waan badhaasanii fi tooftaa fi gorsa haxxummaa kolonaalisiim waan isaan barsiisaniif. Gareen Habashaa meeshaa lolaa baraa fi gorsa kolonalistoota argate wajjin Uummata Oromoo harka qullaa jiru wal gituu hin dandeenye. Ammam iyyuu bara dheeraaf of irraa haa faccisu malee uummatni keenya guutumatti cabuun dirqama itti tahee jira. Gorsa Konolalistotaa keessa tokko adda baasii biti (divide and rule) tooftaan jedhu meeshaa waraanaa caalaa baayyee ulfaataa dha. Kaleessas tahe har’a kan Oromoo hidhuu fi hiisisuu, ajjeessuu fi ajjeessisu kan walii gala lafa irraa dugugee balleessaa jiru Oromoota. Ergamaan Oromoo ajaja gooftaa isaa Habashaa irraa fudhatuu fi garaa isaa guutu ilaala malee roroon uummata Oromoo irra gahaa jiru ilaaluuf yaroo fi dhimma hin qabu.
Mootummaan Habashaa yaroo qabsoo uummata Oromoon muddamuu Oromoota jajjaboo tahan gara fuula duraa dabarsee biyyi kun kan keessan jedhee akka uummata Oromoo gowwomsan godha. Sana booda akka jaarsa saree kosii irratti isaan darba. Mee seenaa J.Tafari Bantii, J. Gebre Kirstoos bulii, J. Meredi Nugusee, J. Demisee Bultoo haa ilaalu. Biyyi Impaayera Itoophiyaa mataa isaanii irratti baatanii jiraatan. Gaafa Mootummaan Habashaa dhimma isaan irraa dhabu ajjeessuu qofaa miti, ajjeessee morma irraa kutaa, akka saree reefa isaanii lafa irra harkisa. Oromoo keessa namoonni garaa isaanii qofa guutachuu hawwan baayyee tahan iyyuu galgalli isaanii bareedaa miti. Bakka owwala isaanii illee namni argu hin jiru. Salphinatu isaan eegata.
Har’aan kana waan baayyee taajabaa jirra. Utuu uummatni Oromoo gara miliyoonni lamaa tahu baqatee biyya isaa keessatti kadhatuu tahee jiru, utuu Qeerroo fi Qarreen Oromoo warri qabsoo kanaaf mana hidhaa keessatti waxalamaa fi tortoraa turan jiruu fi jireenya hin argatiin, utuu haatii fi abaan ilmaan irraa du’an imaaman isaanii hin qooriin ayyaan-ilaallatoonni Oromoo lafaa Oromoo qircachuuf, mana ijaarachuu fi hoomisha itti boba’uu akka wal caccabsaa jiran agarra. Boru immoo warra kanatu qabeenya isaanii eegachuuf jedhee mootummaa Habashaa wajjin tahee Uummata Oromoo kan lafa irraa duguguuf deemu.
“Kaleessa yaroo uummatni Oromoo man hidhaa keessaatti guramaa ture namni kun hunduu eessa turee?” jedhee yaroo Obbo Lammaa Magarsaa yaroo dubbatu dhaga’uun waan ajaa’iba natti tahe. Kaan keenya utuu inni hin dhalatiin kaafne mana hidhaa, dhagalaa fi baqa irraa turre. Kaan keenya immoo qabsoo irratti wareegmne dhumne. Kaan keenya mana hidhaa isaa keessaa gidiramaa turre. Dhugaan dubbii inni isa turee? gaaffii jedhu taha. Kan ilmaan Oromoo ajjeessaa fi ajjesisaa, hidhaa fi hiisisaa qabeenya isaa saamaa fi saamsisaa ture keesssa inni tokko. Harki isaanii kan dhiiga ilmaan Oromoon dhiqamee jiru isaan akka tahe Uummatni Oromoo hin beeku jedhee yoo yaada tahe baayyee of gowwomsaa jira. Mootummaa EPRDF badii jalaa of baraaruu maqaa jijjiramaan abshaalumaa fi haxxumaa waan wixxifachaa jiru kana namni hin hubannee yoo jiraate warra du’ee dhakaa baatu qofa.
Mee maalitu jijjirame? Bara 1991 kaase kan WBO kaampi itti naqee fixe Mootrummaa EPRDF dha. Uummat a Oromoo waggaa 28 mara kan qabeenya isaa saamaa , jiruu fi jireenya gidiraa kenneef Motummaa EPRDF. Har’as of qaree, ija kuulatee akka ilmaan saree ijoollee Oromoo of duraa oofaa bareechee kan jiru Mootummaa EPRDF akka tahe namni haaluu danda’u hin jiru. Maqaa nama olii fi gadi daddabarsanii walkeessa hunkuruun Mootummaan EPRDF jijjiramee jira jechuun of gowwomsuu malee uummata Oromoo dammaqee jiru kana gowwomsu hint ahu. Mootumaa EPRDF aKkuma kaleessa shira xaxaaf ilmaan bakka maratti fixaa jira.
Jijjirama fiduuf, kaayyoo fi akeekni jijjiramuu qaba. Seeraa fi heerri Mootummaan uummata cunqursuuf baafate jijjiramuun isa jalqabaa ti. Lakki “OPDO” naan hin jedhiina. Maqaan koo “PDO” dha jechuun garaagarumaa maalii fidha. Maqaa miti kan xuraa’ee jiru hojii isaanii ti. Utuu hojiin uummata isaanii wajjin dhaabbatanii maqaan kan OPDO caalu hin jiru.Warra maqaa jijjirane jedhu irraa TPLF maqaa ishee qabatee hafteetu irra guddaa ulfina qaba. Warri OPDO of goomsanii waan nama goomsne see’u. Getaachoo Asfaa kan dhala namaa hunda dhiiga dhangalasaa ture yaroo KHG TPLF tahee filamu EPRDF jijjiramee jira jirachuun waan kolfaa ti.
Uummatni Oromoo miliyoonan lakkawamu Bahaa fi Dhihaan saba fi sab-lamii xixxiqaan qe’ee isaa irraa akka buqqa’uu kan tahe waan meeshaa waranaa of harkaa hin qabneef qofa. Gaaffiin Uummata Oromoo Inni Duraa fi Gubaa Hidhachuu Dha. Mootummaan EPRDF mootummaa diina uummata Oromoo waan taheef rorroo uummata keenya irra gahaa jiru akka mootummatti irraa ittisaa hin jiru. Warra buqqaa’e jiru illee qubachiisuu fi gargaaruuf fedhii akka hin qabne argaa jirra. PDOn waa’ee aangoo irraa turuu malee rakkinni Uummata Oromoo itti mul’achaa hin jiru. Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo kana bakkaan gahuuf gaachan Uummata Oromoo kan tahe WBO wajjiin hiriira galee Uummata Oromoo hidhachiisuun yaroon isaa amma. Akka bara 1991 utuu of gannee teenyuu akka hin dagamnee dhumaatiin lammaffaa nu irra hin geenye qophee gahaa qabachuun yaroon isaa amma. PDOn doorsisamuu hin qabnu. PDOn waanuma kaleessa beeknu sana. Garaa isheef malee Kaayyoo duutuuf hin qabdu.Qabsoo keenya itti mudduu malee itti laafsuun diinni akka yaroo bitatu gargaara. Qabsoon Xumura Garbummaa boqota qabaachuu hin qabu!!
Previous articleAbiymania? Damn right!
Next articleSBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Sadaasa 7, 2018
Jabessa November 6, 2018 At 3:14 pm
Yaa Damee Boruu koo,
Waan ati jeecha jirituu kana Oromoo meeqqatuu huubachaa jira lata? Mee yoo jiiratan asraati haabareesan!!
Hoori buuli!!! GLTM
Iwunet Hiwot November 8, 2018 At 4:19 pm
Oromoon hidhachuun gaarii ta’ee jaarmiyaaleen siyaasaa nagaan dorgomuuf galan hidhachuun garuu sirrii hin ta’u. Kan darbe darbe, Hundi bilisa kan babe Team Lammaa dhaan ta’uun hin falmisiisu.
Micciir November 14, 2018 At 9:09 pm
Fedhii fi hawwiin kee akka Oromoon hidhatu dhuguma barbaaddee osoo hin taane sodaa dhaaba Oromoo bilisummaa Oromoof jecha dirqamee qawwee kaasuun falmaa hadhoofturra turee, jijjiirama biyya keessatti amma argaa jirruuf bu’uura ta’e dha. Sodaan keessan ABOdha, WBOdha! Silaa utuu dhuguma akka Oromoon hidhatu fedha qabda tahee WBOn dhala Oromoo ta’uu ubachuu qofti deebii siif ta’a ture.
Team Lammaatu bilisa hunda baase erga tahee ABO/Oromoon/Qeerroon eenyyun falmaa ture? Ennyurratti fincilaa ture? Eenyu kan immoo qabsaa’otaa fi Qeerroo Oromoo ajjeesaa ture? TPLF qofaa isaa Oromoo irratti yakkoota kana raawwachaa ture akka hin jenne! Akka yeroo kufaatii Dargiitti humni riphe lolaan (ABOn) sababa shiraa fi daba keessaa fi alaan isa irratti dalagamaa tureen humna jabeeffatee bakkoota qabachaa ture tahee, fincila didaa/xumura gabrummaa hoogganaa tures qindeessaa osoo Finfinnee qabate tahee xaba siyaasaa TPLF + OPDOn gaafatama (accountability) jalaa wal-baasuuf mijeessaniin ija keessan ashaboon dhiqattanii akkas injifannoo dhiiguma dhangalaasaa/dhangalaasisaa turtaniin argameen as deebitanii Oromoo fi qabsoo isaatti hin qoostan turtan!
Wanuma hundaafuu bolola aangoo qabdaanii fi bor akka kanaan duraatti filannoo hannaa fi sobaa geggeessitanii mo’umsa keessan labsuuf aadaa habashaa jalatti bartan kan dura dhaabbachuu danda’u humna Oromoo hidhatee jiru qofa waan ta’eef akka dirree mijeeffattanii keessa xabachuuf isiniif mijatutti kuftanii kaatanii waa’ee WBO fi Oromoo hidhate balaaleffattu!
Didaa November 8, 2018 At 6:28 pm
Yaadi dhiyeessite kun qorsa/qoricha Oromoon fudhatee dhukkuba jaarraa tokko oliif isa qabee gandeessee (akka dhukkuba gandii) jiru irraa ittiin fayyudha.
Yaada obbo Damee kanatti akka yaadaatti Oromoo sabboonan marti irratti walii gala, garuu akkaataa yaada kana hojiitti jijjiiranii fi hundi raawwii isaatiif gumaachuu danda’u irratti hojiin dhaabbilee siyaasaa Oromootiin hojjetamuu qabu dursuu qaba. Hundi yaada kanatti amanummoo gama danda’een yaada kana facaasuun dirqama lammummaati!